Ndezvipi zviwanikwa ko iyi danidziro yekushambadzira inoda kugoverwa here? Funga nezvevanhu, maitiro, uye mapuratifomu aunoda kushandisa kubata mushandirapamwe nemazvo. Pane here maturusi anogona kukubatsira kukwidziridza mhedzisiro yako?
Ndehupi humbowo hwaunga sanganisira mudanidziro yako? Shandisa makesi, zvipupuriro zvevatengi, zvitupa, ongororo, zviyero, uye tsvagiridzo… ndeipi yechitatu-bato yekusimbisa yaunga sanganisa kuti ukunde chero nyaya dzekuvimba nezve brand yako kana kambani kuti ikuparadzanise kubva kumakwikwi ako?
Pane kumwe kuedza kwaungagona kubatanidza nekuwedzera mhedzisiro yechirongwa ichi? Kana iwe uchigadzira whitepaper, une blog positi, hukama neruzhinji, yakagadziridzwa blog post, kugovana munharaunda, kana kupesvedzera kugovera… ndedzipi mamwe masvikiro nemachanera anogona kubatanidzwa kuti uwedzere kudzoka kwako pamushandirapamwe wekudyara?
Kudaidzirwa-ku-chiito kunoratidzwa zvakajeka here? Kana iwe uri kutarisira kuti chinangwa chako chiite chero chiito, iva nechokwadi chekuvaudza zvekuita zvinotevera uye kuisa zvinotarisirwa pazviri. Pamusoro pezvo, unogona kufunga nezve mamwe maCTA kana asina kugadzirira kuita zvizere panguva ino.
Ndedzipi nzira dzaungabatanidza kuti udzore vateereri vako? Tarisiro yako inogona kunge isina kugadzirira kutenga nhasi… unokwanisa kuvaisa parwendo rwekurera? Vawedzere kune yako email runyorwa? Ita mishandirapamwe yekusiya ngoro kwavari? Kufunga nezvekuti ungadzosera sei vateereri vako kunozokubatsira kushandisa mhinduro nguva isati yakwana.
Tichaona sei kana chirongwa ichi chabudirira? Kubatanidza mapikisheni ekutevera, ma URL emushandirapamwe, kutariswa kweshanduko, kuronda chiitiko… shandisa chikamu chega chega cheanalytics kuyera nemazvo mhinduro yauri kuwana pamushandirapamwe wako kuti unzwisise nzira yekuivandudza.
Zvichatora nguva yakareba sei kuona kana chirongwa ichi chichibudirira? Kangani iwe wauchashanyirazve mushandirapamwe wako kuti uone kuti iri kushanda here kana kuti kwete, paungangoda kuiuraya kana kuigadzira patsva kana kuigonesa kuenda kumberi.
Chii chatakadzidza kubva muchirongwa ichi chekushambadzira chinogona kushandiswa kune chinotevera? Une raibhurari yemushandirapamwe yakanyatsorongeka inokupa mazano ekuvandudza mushandirapamwe unotevera here? Kuve nenzvimbo yeruzivo kwakakosha kusangano rako kuitira kuti usaite zvikanganiso zvakafanana kana kuuya nemamwe mazano emushandirapamwe unotevera.
Sep 28, 2017 na5:27 PM
Akanaka kwazvo Doug - chishandiso chikuru (kuti ini ndigone kutsvaira uye kugadzirisa !!)
Mhoro Sampada, ndine urombo asi handina nguva kana zviwanikwa zvekuita izvi!